အမျိုးသမီး ဖြစ်ချင်ကြသူများ …
အမျိုးသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ အမျိုးသားတွေအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခဏ ကြားနေရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အပါအဝင် အတားအဆီးတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်
အမဲလိုက်ခြင်းသည် ချင်းပြည်နယ်တွင် ယောက်ျားပီသမှု၏ အမှတ်အသား တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် အရေအတွက် ကျဆင်းလာသဖြင့် သဘောထားများလည်း ပြောင်းလဲလာကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ကျဆင်းသွားဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ပ ျှမ်းမ ျှ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၇.
ချင်းပြည်နယ် ရွာ တစ်ရွာက ဒေသခံတွေဟာ ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ အရိုးစုတွေကို ကစားစရာ အမှတ်နဲ့ သုံးနေကြပါတယ်။
ပင်လယ်ရေကြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် ၂၀၁၆ (Maritime Labor Convention of 2016) ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည့်အတွက် မြန်မာသင်္ဘောသားများ၏ အခွင့်အရေးကို ပိုမိုကာကွယ်ပေးနိုင်တော့မည်ဟု နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့(အိုင်အယ်လ်လို) ကပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို မေ.
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအရေးယူခံရမည့်ကိစ္စ အလျင်စလိုမလုပ်ဟု ထုတ်ပယ်ခံရသူများပြောကြား
ဥပဒေကြောင်းအရ အလျင်စလို မဖြေရှင်းသေးဘဲ စိတ်ရှည်ရှည်ထား စောင့်ကြည့်ဦးမည်ဟု ထုတ်ပယ်ခံရသူများက ပြောကြားသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းသို့ အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက်ကာ စစ်သွေးကြွ ရှစ်ဦးကို သုတ်သင်
မေ ၂၇ ရက်နေ့က စစ်ဆင်ရေးတွင် စစ်သွေးကြွရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်များထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်